Nin loo qabtay weerarkii gaariga loo adeegsaday ee Stockholm - BBC News Somali
Muuqaalka dad ka cararaya gooobta uu weerarku ka dhacay
Maamulka dalka Sweden ayaa xiray nin ay aaminsan yihiin inuu ka dambeeyay weerarkii gaariga loo adeegsaday ee shalay ka dhacay Stockholm.
Dacwad oogayaasha waxay sheegayaan in ninkaasi looga shakiyay in uu argagixiso xiriir la leeyahay.
Warbaahinta dalka Sweden waxay sheegayaan in ninka oo 39-sano jir ah uu ka soo jeedo Uzbekistan.
Afar qof ayaa dhimatay 15 kalena way dhaawacmeen ka dib markii gaari xamuul oo la soo xaday la jiirsiiyay dad wado marayay.
Ka dib ninkii waday gaariga wuxuu ku dhuftay dhismo ku yaalla bartamaha magaalada Stockholm.
Gaariga xamuulka ah ee weerarka loo adeegsaday ayaa laga saaray dhismihii lagu dhuftay.
Image caption Gaariga loo adeegsaday weerarka ayaa laga jiiday goobta
Booliska ma aysan xaqiijin wararka sheegayo in gaariga ay saarnaayeen waxyaabo qarxa.
Sidoo kale maysan ka hadlin nin kale oo la qabtay, in looga shakinayo in uu ku lug lahaa weerarka.
Gaari xamuuul ah oo dad ku laayay dalka Sweden
Dad lagu dhaawacay magaalada Malmo
Gaariga xamuulka ah ayaa laga soo xaday meel u dhow goobta uu weerarka ka dhacay.
Lahaanshaha sawirka Swedish police handout
Image caption Booliska ninkan ayey raadinayeen ka dibna way qabteen
Goob joogayaal ayaa dhacdada ku tilmaamay mid argagax leh, waxayna arkeen "dad badan oo dhaawac ah oo dhulka daadsan".
Ra'iisul wasaaraha Sweden, Stefan Lofven, ayaa dhacdada ku tilmaamay mid argagixiso, wuxuuna amray in amniga xuduudaha la adkeeyo.
Weerarada gawaarida loo adeegsaday ee dalalka reer galbeedka ka dhacay
14 July 2016, Nice, Faransiiska: Nin ayaa gaari jiirsiiyay dad isugu soo baxay magaalada Nice ee dalka Faransiiska. 86 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 300 oo qofna way ku dhaawacmeen.
28 November 2016, Ohio, Mareykanka: Nin la sheegay in uu 18-jir ahaa ayaa gaari dardarsiiyay ardey ku dhex socotay jaamacadda Ohio. 11 qof ayaa ku dhaawacantay goobta, asigana waa la toogtay.
19 December 2016, Berlin, Jarmaalka: Weerarkii Berlin waxaa lagu dilay 12 qof, 49 kalena way ku dhaawacmeen, ka dib markii nin uu gaari dhexmariyay suuq ay ka adeeganayeen dad u diyaar garoobayay ciidda masiixiyadda. Ururka la baxay Khilaafada Islaamka ayaa sheegtay masuuliyaadda.
22 March 2017, London, Britain: Afar qof ayaa dhimatay, ugu yaraan 50 kalena way dhaawacmeen ka dib markii nin uu gaari ku dhuftay xilli ay marayeen buundada Westminster. Ka dib wuxuu ninkaasi galay xarunta baarlamaanka wuxuuna middi ku duray askeri, ka dibna waala toogtay.
23 March 2017, Antwerp, Belgium: Nin ayaa la qabtay xilli uu gaarigiisa ku jiheeyay dad badan oo meel isugu tagay, waxaa laga helay middi iyo waxyaabo kale oo halis ah. ka dib waxaa la laalay eedihii loo jeediyay ee argagixisenimada.
Boqorada Sweden Silvia ayaa sheegtay in guriga boqortooyada uu ku jiro reer aaqiraad
Maqal Saacadaha shaqada ee Sweden oo laga dhigayo 6-saacadood
Maqal Sweden oo malaayiin dollar ku deeqday abaaraha Soomaaliya